UMarina uzalwe nge-Ellicott Series 370 Dredge - Ellicott Dredges
Source: Kucashunwe eBay Weekly On-Line Publication
IDeale iyitheku elikhulukazi laseWestern Shre phakathi kwe-Annapolis neSolomons. Kodwa ukuze bafike emanzini ayo avikelwe, abagibeli bezikebhe kuye kwadingeka badlule eScylla naseCharybdis. Ukucwatshwa kwezinsuku zanamuhla kwalezo zilo ezikhulu zase-Odyssean kuye kwabeka phansi isikebhe esiningi.
I-Scylla, idwala, yi-jetty yamatshe engamamitha angu-900 evikela itheku elisenyakatho. Uma udlula eSyllla, kusamele ubhekane neCharybdis. I-whirlpool eStraits of Messina yangakubo, iDeale's Charybdis ingamanzi asogwini eRockhold Creek, isiteshi esingena echwebeni laseDeale.
I-Scylla igxilile, kepha njalo emuva kweminyaka eyisithupha noma ngaphezulu i-Army Corps of Engineers ilwa noCharybdis, ikhipha iRockhold Creek ibanga elingamamitha ayi-7,000 256 ukusuka emlonyeni wetheku kuya ebhulohweni elinqamula i-Route 1994. Isiteshi esakhiwe yi-federally sagcina ukubanjwa ngo-XNUMX. ukujula kwamamitha ayisikhombisa.
Manje, cishe ibanga elingaphansi nonyawo nohhafu kwezinye izindawo, ngokusho kukaTom Wilhem, umphathi wezemikhumbi eHerrington Harbour North, emfuleni. AmaMarinas afana noHerrington agcina izindima zawo zikwazi ukuhamba ngendlela.
“Lesi siteshi siyashwabana, futhi abantu abaningi ngeke bakwazi ukukhipha izikebhe zabo,” kukhathazeka labo bantu, itilosi uJack Hanse, othelela emfudlaneni weShipwright Harbour.
Usizo lusendleleni, ngokusho kukaCongressman Steny Hoyer, ofake isigamu semigidi yama-dollar kumthethosivivinywa we-House Energy and Water Appusions.
"Sizame kanzima ukwenza umsebenzi ngokushesha okukhulu ngoba ubaluleke kakhulu emphakathini wamanzi waseDeale," kusho uHoyer.
Izinkampani ezimbili zibhida, kufaka phakathi i-Southern Maryland Dredging of Friendship.
Ophumelele, iBay West Inc. yaseSt.Paul, Minn., Wethole ngeloli i-Ellicott® Brand Series 370 dredge ekuqaleni kukaFebhuwari ngenyanga ukuqedela ukwakhiwa kwayo kabusha.
I-370 dredge, eyakhiwe futhi yakhiwa yi-Ellicott® iDivision of Baltimore Dredges iyi-pontoon-borne hydraulic dredge esusa indle bese iyithumela ngepayipi esizeni sokwakheka. Kulokhu, iHerrington Harbour North yemukela okuphangiwe kwedredge.
Kucashunwe eBay Weekly On-Line Publication